Crime – Channel Myanmar
IMDB: 6.2/10 38,327 votes
Switch (2013) Switch (2013) IMDb - 2.3/10_____Rotten - 50% Action, Crime, Romance အမြိုးအစားဇာတျကားဖွဈပွီး မငျးသား Andy Lau က အေးဂငျြ့ဖိုကျတာတဈယောကျအဖွဈ အဓိကပါဝငျထားပါတယျ။ ဒီဇာတျကားမှာ အထူးခံစားမိတာက ရိုကျခကျြတှလှေပကောငျးမှနျတာကိုပါ။ ဇာတျလမျးသဘောကို မေးခှနျးထုတျခငျြစရာရှိပမေယျ့ ရိုကျခကျြတှေ.... ဖနျတီးထားတဲ့ Scene တှကေတော့ အဆငျ့မွငျ့လှပပါတယျ။ ဒါကွောငျ့လဲ တခြို့က မကွိုကျဘူးဆိုနပေမေယျ့ တခြို့ကတော့ အကွိုကျတှလှေ့ပါတယျလို့ ပွောနကွေတဲ့ ဇာတျကားပါ။ သူငယျခငျြးတို့လဲ ကိုယျတိုငျသာကွညျ့ပွီး ဆုံးဖွတျလိုကျကွပါ။ Action, Crime, Romance အမျိုးအစားဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး မင်းသား Andy Lau က အေးဂျင့်ဖိုက်တာတစ်ယောက်အဖြစ် အဓိကပါဝင်ထားပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားမှာ အထူးခံစားမိတာက ရိုက်ချက်တွေလှပကောင်းမွန်တာကိုပါ။ ဇာတ်လမ်းသဘောကို မေးခွန်းထုတ်ချင်စရာရှိပေမယ့် ရိုက်ချက်တွေ.... ဖန်တီးထားတဲ့ Scene တွေကတော့ အဆင့်မြင့်လှပပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ တချို့က မကြိုက်ဘူးဆိုနေပေမယ့် တချို့ကတော့ အကြိုက်တွေ့လှပါတယ်လို့ ပြောနေကြတဲ့ ဇာတ်ကားပါ။ သူငယ်ချင်းတို့လဲ ကိုယ်တိုင်သာကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါ။ File size...(900MB) Quality...BR-Rip 720p Format...mp4 Duration....02:02:00 Subtitle....Myanmar Subtitle (Hardsub) Encoder....Nyeinsaeya Aung နမူနာကွညျ့ရနျ
IMDB: 2.3/10 1,726 votes
Saving Mr. Wu (2015) ဒီဇတျကားဟာ အဆိုတျော မငျးသားကွီး Andy Lau ကို အကွမျးအရမျး ပုံစံမြိုးနဲ့ တှရေ့မှာ မဟုတျသလို ခပျညံ့ညံ့ ပုံစံမြိုးလဲ မဟုတျပွနျပါဘူး... ရုပျရှငျမငျးသားကွီး ဝူ ဟာ သူ့မနျနဂြော နှငျ့ အတူ ပှဲတဈခုမှ အပွနျ ရဲဟု ပွောဆိုသူတှထေံ အကွောငျးရှာဖမျးဆီးခံလိုကျရပါတယျ နောကျမှ သိရတာကတော့ ရဲဆိုသူတှဟော ရဲအတုတှေ ဖွဈပွီး ဝူ ကို ပွနျပေးဆှဲပွီး အကပျြကိုငျ ငှညှေဈမယျ့သူမြားပဲ ဖွဈပါတယျ... ပွနျပေးဆှဲသူဟာလဲ အရငျက လိမျလညျမှုမြားနဲ့ ထောငျ ၉ နှဈကပြွီး ထောငျက ထှကျလာတာ တဈနှဈမပွညျ့သေးတဲ့ သူ တဈဦးလဲ ဖွဈနပေါတယျ ပိုဆိုးတာက သူ ပွနျပေးဆှဲတဲ့သူတှကေို ပိုကျဆံမရရအောငျ အကုနျ ညှဈယူပွီး အသကျရှငျလကျြ ပွနျမလှတျတကျတဲ့နရောမှာ နာမညျကွီးပွနျပါတယျ... ဝူ ထကျ အရငျ ဖမျးဆီးခံရသူနှငျ့ ဝူ နှဈဦးသားဖမျးဆီးခံထားရပွီး အရငျဖမျးဆီးခံထားရသူတှကျပါ သနားသဖွငျ့ ဝူ မှ ပွနျပေးငှေ ပေးမညျဟု ကတိခံပွီး သူ့အိမျတှငျ ဘဏျကတျ သှားယူရနျ လူဆိုးအားပွောလိုကျပါတယျ ဘတျကတျ ...
IMDB: 6.7/10 2,078 votes
The Attacks Of 26/11 (2013) The Attacks Of 26/11 (2013)_____IMDb - 6.9/10 The Attacks of 26/11 ဒီဇာတျကားလေးကတော့ IMDb rating 6.9 ရရှိထားပွီး 2008 ခုနှဈ နိုဝငျဘာလ (၂၆)ရကျနကေ့ အိန်ဒိယနိုငျငံမှာ ဖွဈပှားခဲ့တဲ့ အကွမျးဖကျတိုကျခတျမှုကို အခွခေံရိုကျကူးထားတဲ့ ဖွဈရပျမှနျ ဇာတျကားတဈကားဖွဈပါတယျ။ ဒီဖွဈရပျကို အိန်ဒိယနိုငျငံသားတှအေနနေဲ့ 9/11 လိုမြိုး 26/11 လို့ချေါဝျေါကွပွီးတော့ ယနထေ့ကျတိုငျ ဝမျးနညျးခွငျးအထိမျးအမှတျတှေ လုပျကွဆဲပါ။ အကွမျးဖကျအဖှဲ့က ပါကစ်စတနျအခွစေိုကျ Lashkar-e-Taiba အဖှဲ့ဖွဈပွီးတော့ အဖှဲ့ဝငျ(၁၀)ဦးနဲ့ အိန်ဒိယအထငျကရ(၁၂)နရောကို တိုကျခတျခဲ့တာဖွဈပွီး လူ(၁၆၄)ယောကျ သဆေုံးခဲ့ရတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ဒီဇာတျကားက အဲဒီဖွဈရပျမှနျကို Documentary Film အဖွဈ ရိုကျကူးတငျဆကျထားတာဖွဈပွီး အကွမျးဖကျသမားတှရေဲ့ ဘာသာရေး အသုံးခမြှုကို ကှကျကှကျကှငျးကှငျးမွငျအောငျ ရိုကျပွထားတာတှရေ့မှာပါ သငျခနျးစာတှေ တှေးတောဆငျခွငျစရာတှေ အမြားကွီးပေးတဲ့ ဇာတျကားကောငျးတဈကားဖွဈလို့ လုံးဝကို လကျလှတျမခံသငျ့ပါကွောငျးလို့ ပွောပါရစေ။(ဒီဇာတျကားရဲ့အညှနျးနဲ့ ဘာသာပွနျရေးသားပေးသူကတော့ CM Team မှ ညီလေး Sherlock ဖွဈပါတယျ။) @San Win Maung File Size ...
IMDB: 6.9/10 4,512 votes
A Lonely Place To Die (2011) ၂၀၁၁ ခုနှစ်ထွက် အက်ရှင်စွန့်စားခန်း ဇာတ်လမ်းကောင်းကောင်းလေးတစ်ကား တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Imdb 6.3 ရထားပြီး အတော်လေးကောင်းပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းက တော့ စကော့ကုန်းမြင့်တောင်တန်းတွေဘက်ကို တောင်တက်ခရီးထွက်လာတဲ့ အဖွဲ့လေးဟာ တောထဲက မြေအောက်ခန်းငယ်လေးထဲမှာ ပိတ်ထားခံရတယ် ကလေးငယ်မလေးကို တွေ့ပြီး ကယ်ဆယ်လာခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကလေးနောက်ကို အင်မတန်ကြမ်းတမ်းတဲ့ လူသတ်သမား လူတစ်စုက ရေဆုံးမြေဆုံးလိုက်လာတဲ့အခါမှာ အင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ စွန့်စားခန်းတွေစတင်လာပါတော့တယ်။ အဲ့ဒီကလေးမလေး နောက်ကွယ်က အကြောင်းရင်းတွေက ဘာတွေလဲ သူတို့ ဘယ်လိုလွတ်မြောက်အောင် ရုန်းကန်ကြမလဲဆိုတာကိုတော့........File Size : 780 MB Quality : Blu ray 720P Running Time : 1hr 39 minute Format : Mp4 Genre : Action, Adventure, Crime Encoder : Joker.phs Download And watch With Pcloud ...
Closed Circuit (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး လန်ဒန် ရဲ့ အထင်ကရဈေးတခုမှာ ပေါက်ကွဲမှု့တခု ဖြစ်ပွဲခဲ့ပြီး လူပေါင်း ၁၂၀ ကျော် သေဆုံးခဲ့ပါတယ်… ဒီဖြစ်ရပ်မှာ သံဒယရှိခြင်း ခံရသူ တဦး ကို ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်…တရားလိုရှေ့နေအဖြစ်လိုက်ပါဆောင်ရွက်နေတဲ့ ဆိုင်မွန် ဟာ ရုတ်တရတ် သေဆုံးသွားခဲ့ပြီးနောက် Martin Rose ကိုဆောင်ရွက်စေဖို့ လွဲပြောင်းပေးခြင်းခံရသလို တချိန်ထဲမှာပဲ တရားခံဖက်က ရှေ့နေအဖြစ် Claudia Simmons ကို ဆောင်ရွက်စေခဲ့ပါတယ်…သူတို့ ၂ ဦးဟာ မကြာခင်အချိန်တခုကမှ ပြတ်စဲထားတဲ့ လင်မယားတွေ ဖြစ်ပေမယ့် ဒီအမှုကို ပေးအပ်လိုက်ချိန်ကစလို့ တဦး နဲ့ တဦး မည်သည့် အကြောင်းနဲ့မှ ဆက်သွယ်ခွင့် နဲ့ ဆက်သွယ်မည် မဟုတ်ပါကြောင်း ကို ကတိပေးထားရပြန်တယ်..တရာခံရှေ့နေ Claudia ဟာ MI5 agent Nazrul Sharma ရဲ့ ထိမ်းသိမ်းမှု့အောက်မှာသာ လှုပ်ရှားခွင့်ရှိပြီး တရားခံ Farroukh ...
Closed Circuit (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Broken City (2013) Broken City (2013)______IMDb - 6.2/10Shooter မငျးသား Mark Wahlberg နဲ့ နာမညျကြျောမငျးသား Russell Crowe တို့ပါဝငျတဲ့ သညျးထိပျရငျဖို မှုခငျးဇာတျလမျးလေးပါ...Shooter မင်းသား Mark Wahlberg နဲ့ နာမည်ကျော်မင်းသား Russell Crowe တို့ပါဝင်တဲ့ သည်းထိပ်ရင်ဖို မှုခင်းဇာတ်လမ်းလေးပါ... File Size - 774 MB Quality - 720p Translator - Ei Ei Mar Encoder - San Win Maung
IMDB: 6.2/10 74,319 votes
Death Note TV Series (2015) အခုတင်မဲ့စီးရီးကတော့ ဂျပန်ဇာတ်ကားကောင်းကြိုက် ပရိသတ်ကြီးအတွက် Death Note(2015) Series ပါ အရင် DeathNote movie တုန်းကလိုပဲ Kira(Light) နဲ့ L တို့ရဲ့ ကြားထဲက ကစားပွဲလိုပါပဲ DeathNote ဟာ ဂျပန် မန်ဂါ ကနေပြီးတော့ Live Action ပြန်ရိုက်ထားတဲ့ဇာတ်လမ်းပါပဲ Movie တုန်းကတော့ အကျဉ်းချုံးသဘောမျိုးဖြစ်ပေမဲ့ Series ပြန်ရိုက်တဲ့အခါမှာတော့ မန်ဂါထဲကဇာတ်လမ်းတွေ အတတ်နိုင်ဆုံး စုံအောင်ပြန်ရိုက်ထားပါတယ်ဇာတ်လမ်းသွားကတော့ Light တစ်ယောက် သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ အနိုင်ကျင့်ခံရတာကနေ မကျေနပ်စိတ်တွေဖြစ်တုန်း သေမင်း Ryuk နဲ့တွေ့ Deathnote စာအုပ်ကို ရလာပါတယ် ဒီစာအုပ်မှာ နာမည်ရေးခံရရင် အဲ့ဒီသူဟာ စက္ကန့်၄၀ အတွင်းသေမှာဖြစ်ပါတယ် သေရမဲ့အကြောင်းရင်းကိုရေးထားရင် အဲ့ဒီအတိုင်းသေပြီးတော့ မရေးရင်တော့ နှလုံးရုတ်တရက်ဖောက်ပြီး သေမှာပါ Light တစ်ယောက် Death Note စာအုပ်နဲ့ Lကို ဘယ်လို ...
Death Note TV Series (2015)
Wanted (2008) Wanted (2008) IMDb - 6.7/10______Rotten 71% ဝီစလေ ဂဈ(ဘျ)ဆငျ [James McAvoy] ဆိုတဲ့ လူငယျလေးဟာ ခြီကာဂို မွို့ထဲက ကုမ်ပဏီတဈခုမှာ ဘာတကျလမျးမှ မရှိတဲ့ စားရငျးကိုငျ အလုပျလေးတဈခုအတှကျနဲ့ သူတဈပါးကို ပေးထားတဲ့ လုပျခလစာနဲ့မတနျအောငျ မတရားခိုငျးစပွေီး မိမိကိုယျတိုငျကတော့ ဘာအလုပျမှမလုပျတဲ့ အထကျလူကွီးတဈယောကျရဲ့လကျအောကျမှာ အလုပျလုပျကိုငျရပါတယျတဈနမှေ့ာတော့ ဂဈ(ဘျ)ဆငျ တဈယောကျ သူ့ရဲ့အတူနခေဈြသူက သူ့အပျေါသစ်စာမရှိပဲ သူရဲ့အခငျဆုံး သူငယျခငျြးတဈယောကျနဲ့ ဖောကျပွနျတာကွောငျ့ စိတျအာရုံထှပွေားပွီး ခေါငျးကိုကျနတောကွောငျ့ သူကိုယျတိုငျအတှကျခေါငျးကိုကျပြောကျဆေးနဲ့အတူ သူ့ခဈြသူအတှကျ သန်ဓတေားဆေးပါ ဝယျနတေဲ့အခြိနျ ဆေးဆိုငျလေးမှာ ... ဖော့(ဈ) [Angelina Jolie] ဆိုတဲ့ အမြိုးသမီး တဈယောကျနဲ့တှဆေုံ့ခဲ့တယျ ဖော့(ဈ) က ဝီစလရေဲ့ဖခငျ ကို သူမ သိကွောငျး ယမနျ နညေ့က သူ့အဖေ အသတျခံရကွောငျးနဲ့ သူ့အဖကေို သတျတဲ့ လူသတျတရားခံက သူ့နောကျကို လိုကျနကွေောငျး ပွောပွပမေဲ့ သာမနျ လူရိုးသားလေး ဂဈ(ဘျ)ဆငျ အဖို့တော့ ဒီကိစ်စကွီးဟာ လကျမခံနိုငျစရာ ဖွဈနပေါတယျဒီလိုနဲ့ ဖော့(ဈ) ဟာ ဂဈ(ဘျ)ဆငျ ...
IMDB: 6.7/10 353,019 votes
Run All Night (2015) Run All Night (2015)IMDb - 6.6/10_____Rotten - 59% 2015 မှာ ထှကျရှိထားတဲ့ Run All Night ဆိုတဲ့ဇာတျကားကောငျးတဈကားနဲ့မိတျဆကျပေးလိုကျပါတယျ အားလုံးစောငျ့မြှျောနတေဲ့ဇာတျကားလို့ထငျပါတယျ..ကြှနျတျောတို့အသညျးစှဲကွိုကျခဲ့တဲ့ Taken ဇာတျကားမှာ သရုပျဆောငျထားတဲ့မငျးသားကွီး Liam Neeson သရုပျဆောငျထားပါတယျ.. IMDb Rating 6.6 ရရှိထားတဲ့ဇာတျကားကောငျးတဈကားဖွဈပါတယျ..မကွညျ့ခငျ Movie Review လေး အရငျခံစားကွညျ့လိုကျရအောငျ :) ဇာတျလမျးလေးကတော့ ဖခငျတဈယောကျရဲ့မတ်ေတာအကွောငျးပါ... မိုကျကယျကတော့ လူကောငျးလေးပါ သမ်မာအာဇီဝအလုပျနဲ့အသကျမှေးဝမျးကြောငျးလုပျပမေဲ့ သူ့အဖကေတော့ အရငျတုနျးက သူ့သူငယျခငျြးနဲ့တူတူ ဘိနျးအရောငျးဝယျလုပျရငျး တခြိူ့သော သူငယျခငျြးတှကေိုတောငျ သတျခဲ့ပါတယျ တနတေ့ော့ သူ့သူငယျခငျြးသားဒနျနီက လူသတျတာကို မိုကျကယျမွငျသှားလို့ဆိုပီး မိုကျကယျကိုသတျဖို့လုပျတယျ အဲဒါကို သူ့အဖကေ အရငျလကျဦးပီး ဒနျနီကို သတျလိုကျပါတယျ အဲဒီမှာ သူနဲ့သူ့သူငယျခငျြး ရနျဘကျဖွဈသှားတော့ပါတယျ သူ့သူငယျခငျြးက ပွနျလကျစားခပြေုံ သူကလဲ သူ့သားကို ဖခငျတဈယောကျအနနေဲ့ အသကျစှနျ့ကာကှယျပုံတှကေို ကွညျ့ရှုရမှာဖွဈပါတယျ Filesize : 655 MB Quality : 720p Format: mp4 Running Time : 1h 54m IMDb ...
IMDB: 6.6/10 100,234 votes
The Call (2013) The Call (2013)IMDb - 6.7/10_____Rotten - 44% 2013 ခုနှဈက ထှကျရှိခဲ့ပွီး IMDb Rating မှာ 6.7 ရရှိထားတဲ့ The Call ဆိုတဲ့ရုပျရှငျကားလေးနဲ့ မိတျဆကျပေးခငျြပါတယျ... အရေးပျေါဖုနျးချေါစငျတာ မှာ အလုပျလုပျတဲ့ ဝါရငျ့အျောပဗရေေ တာ ဂြျောဒနျဟာ သူမရဲ့ နစေ့ဉျအလုပျရဲ့ တဈစိတျတဈပိုငျးအဖွဈ..အကွမျးဖကျမှုတှေ အန်တရာယျဖွဈမှုတှကေို ဖုနျးခိုးနားထောငျရငျးနဲ့ ကယျတငျလရှေိ့တဲ့သူတဈယောကျဖွဈပါတယျ.... တဈနမှေ့ာတော့ အမြိုးသမီးငယျတဈဦးပွနျပေးဆှဲခံလိုကျရတဲ့အခြိနျမှာ သူမကယျတငျနိုငျခဲ့တဲ့အတှကျ အရမျးကိုယူကွုံးမရဖွဈခဲ့ပါတယျ ဒီလိုနဲ့သူဟာ ဖိအားမြားမြားနဲ့ အလုပျတှကေိုပိုမိုကွိုးစားတဲ့အပွငျကှငျးဆငျးလလေ့ာပွီး ကူညီဖို့ပါပွငျဆငျပါတော့တယျ...ပွနျပေးဆှဲသူဆီက ဖုနျးဝငျလာတဲ့အခါမှာတော့ ဂြျောဒနျတဈယောကျအရငျတုနျးကသူမ တဈခါမှမလုပျဖူး..တာဝနျမယူဖူး ခဲ့တဲ့ အလုပျတှကေို လုပျပွီးကောငျမလေး ကို ကယျတငျဖို့ကွိုးစားပါတော့တယျ.. ဒီဇာတျကားကို Blu-Ray720p ကို ဖိုငျဆိုဒျအသေးဖွငျ့တငျဆကျထားပွီး ကွညျကွညျလငျလငျ ကွညျ့ရှုခံစားရမှာဖွဈပါတယျ Filesize : 505 MB Quality : Blu-Ray Rip 720p Format : mkv Duration : 1:34:00 Subtitle : Myanmar Subtitle ( Hardsub ) Encoder : LK
IMDB: 6.7/10 110,704 votes
Homefront (2013) ဒီတဈခါတော့ အကျရှငျပရိတျသတျအကွိုကျ ဇာတျကားတဈကားနဲ့ မိတျဆကျပေးပါရစေ။ Transporter မငျးသား Jason Statham ရဲ့ကားဆိုတော့ ပရိတျသတျကွီးသိတဲ့အတိုငျး အကျရှငျကွမျးကွမျးရမျးရမျးတှေ ကွညျ့ရမှာပါ။မငျးသားက ဒီကားမှာ DEA Agent ဖွဈပွီး ဇာတျလမျးအစမှာတငျ သူက Undercover ဝငျလုပျနရောကနေ သူဖမျးရမယျ့ လူဆိုးကိုလညျး မိသှားသလို လူဆိုးရဲ့သားလညျး သသှေားပါတယျ။ အဲ့ဒီမှာ မငျးသားက Undercover အလုပျကို စိတျကုနျပွီး အလုပျက နုတျထှကျသှားပွီး တောရှာလေးတဈရှာမှာသှားနပေါတယျ။ အဲ့ဒီရှာမှာ လူဆိုးဗိုလျအဖွဈ James Franco က သရုပျဆောငျထားပွီး သမရိုးကြ အကျရှငျကားတှအေတိုငျး မငျးသားနဲ့ ဒသေခံတဈခြို့နဲ့ ပွသ၁နာဖွဈကွရာကနေ James Franco က မငျးသားကို DEA မှနျးသိသှားတဲ့ တဲ့အခါမှာ မငျးသားဖမျးပေးခဲ့တဲ့ လူဆိုးရဲ့ တပညျ့တှကေို သတငျးပေးပွီး မငျးသားကို အပွတျရှငျးခိုငျးပါတယျ။ အလဲအလှယျအနနေဲ့ သူရဲ့ ဘိနျးတှကေို လူဆိုးတှကေ ...
IMDB: 6.5/10 103,562 votes
Tracers (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး မြန်မာပရိသတ်တွေ ရင်းနှီးပြီးသား မင်းသားတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ တေလာလော့တ်နာ အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ အမေရိကန်သည်းထိတ်ရင်ဖို အက်ရှင်ဇာတ်ကားသစ်ပါနယူးယောက်မြို့မှာ စက်ဘီးနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ ဆက်သားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကမ်ဟာတစ်နေ့မှာ မြို့ထဲကို စက်ဘီးစီးသွားတုန်း မတော်တဆ စက်ဘီးလဲရင်း နစ်ကီဆိုတဲ့ မိန်းကလေးနဲ့ ဆုံခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက်တော့ နစ်ကီဟာ သူ့အပေါင်းအဖော်တွေနဲ့ ကမ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး နစ်ကီတို့အဖွဲ့ဟာ ဓားပြတိုက်၊ လုယက်မှုတွေလုပ်တဲ့ အဖွဲ့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ခုန်ပျံကျော်လွှားရင်း အဖွဲ့လိုက်ဓားပြတိုက်တဲ့ နစ်ကီတို့အဖွဲ့နဲ့ ပူးပေါင်းနိုင်ဖို့အတွက် သူတို့လိုဖြစ်အောင် ကမ်ဟာအခုန်အပျံတွေ လေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်။ တရုတ်မာဖီးယားဂိုဏ်းနဲ့ အကြွေးမကင်းဖြစ်နေတဲ့ ကမ်က နစ်ကီတို့အဖွဲ့ထဲကို ၀င်ခဲ့ပါတော့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ အဖွဲ့တွေအတူတကွ ဓားပြတိုက်ကြရင်း ကမ်နဲ့ နစ်ကီတို့လည်း ချစ်ကြိုးသွယ်ခဲ့သလို အဖွဲ့သား အချင်းချင်း သစ္စာဖောက်မှုတွေရှိလာတဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာ ကြည့်လိုက်ပါဦး။ ဒီဇာတ်လမ်းမှာ ပါကာလို့ခေါ်တဲ့ အခုန်အပျံအားကစားကို အသားပေးပြီး ရိုက်ပြထားတာမို့ ပါကာကို စိတ်ဝင်စားသူတွေ လည်း နှစ်သက်ကြမှာပါ။ ကမ်အဖြစ် တေလာလော့တ်နာ၊ နစ်ကီ ...
IMDB: 5.6/10 18469 votes
Focus (2015) Focus (2015) _____________ Death shotနဲ့ Harley Quinnကြီးပါတဲ့ ၂၀၁၅တုန်းကထွက်​တဲ့အရမ်း​ကောင်းတဲ့ Focusဆိုတဲ့ကား​လေးပါဒါကတော့ IMD RATING 6.6ရထားတဲ့ Will Smithရဲ့ဇာတ်ကားကောင်းလေးတခုပါNickyဟာ Jessဆိုတဲ့မိန်းကလေးရဲ့ချိန်းခြောက်ငွေညှစ်ဖို့ကြိုးပမ်းတာကိုခံရပါတယ် ဒါပေမယ့် Jessမသိတာက Nickyဟာ ၀ါရင့်ကျွမ်းကျင်သူ သူခိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပါပဲ Nickyရဲ့ ပညာပေးမှုက်ိုခံရပြီး Jessဟာ Nickyတို့ရဲ့အဖွဲ့ထဲဝင်ကာ သူခိုးတို့တတ်အပ်တဲ့ပညာကိုသင်ကြားပါတော့တယ် နောက်ပိုင်းNickyနဲ့ချစ်သူတွေပါဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ပိုက်ဆံတွေအများကြီးရတဲ့အလုပ်ကြီးတခု ပြီးချိန်မှာNickyက Jessကိုပိုက်ဆံတွေပေးပြီး ရုတ်တရက်ထားခဲ့ပါတယ် ဒါပေမယ့် Nickyသတိမထားမိလိုက်တာက Jessကို Nickyတကယ်ချစ်မိသွားတာပါပဲ နောက်ငါးနှစ်အကြာမှာ ပြိုင်ကားသူဌေးတယောက်ဆီက နည်းပညာကို ခိုးယူဖို့Nickyအစီအစဉ်တွေချပြီး ကြိုးစားနေချိန်မှာ မမျှော်လင့်ပဲ Jessဟာ ပြိုင်ကားသူဌေးနဲ့တွဲနေတာကို Nickyတွေ့လိုက်ရတော့.... အချစ်ဟောင်းကိုပြန်ပေါင်းဖို့ကြိုးစားမလား အချစ်ဟောင်းကိုဂရုမစိုက်ဘဲ ပြိုင်ကားသူဌေးဆီကနည်းပညာပဲခိုးမလားဆိုတာကိုတော့.... File size...999MB Quality...Bluray rip Format...mp4 Duration....01:44:36 Subtitle....Dr.Nyan Encoder....Littleneoနမူနာကြည့်ရန်
Dragon (2011) Dragon (2011) IMDb - 7.1/10_____Rotten - 85% မငျးသားကွီး Donnie Yen ပါဝငျထားတဲ့ သိုငျးလောကသားတှအေကွိုကျဇာတျကားကောငျးဖွဈပါတယျ။ IMDb Rating (7.1/10) ရရှိထားတာကွောငျ့ လကျလှတျမခံသငျ့တဲ့ဇာတျကားပါ။ (မွနျမာစာတနျးထိုးကိုတော့ ညီလေး Kyaw Swar Win မှ ကိုယျတိုငျ ဘာသာပွနျတငျဆကျလိုကျတာဖွဈပါတယျ။) File size...1100 MB Quality....Blu-ray Rip Format...AVI Duration....01:52:00 Subtitle....Myanmar Subtitle (Hardsub) Encoder....Kyaw Swar Win
IMDB: 7.1/10 13,755 votes
Captain Phillips (2013) ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ အမေရိကန်တွေအတွက် အံ့အားသင့်ဖွယ်ရာကိစ္စတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ် အမေရိကန်ကုန်တင်သင်္ဘောတစ်စင်း ပြန်ပေးဆွဲခံရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။အိုမန် (Oman) နိုင်ငံ၊ ဆလာလဆိပ်ကမ်း (Port Of Salalah) ကနေ ကုန်ပစ္စည်းတွေသယ်ဆောင်လာတဲ့ အမေရိကန်ကုန်တင်သင်္ဘော အမ်ဗွီ မဲဆ်ခ် အာလဘာမား (MV Maersk Alabama) ဟာ ဆိုမာလီကမ်းရိုးတန်းကို ဖြတ်ကျော်ပြီး ကင်ညာနိုင်ငံ (Kenya)၊ မွမ်ဘာဆာမြို့ (Mombasa) ကို ခရီးအဆက်၊ လမ်းမှာ ဆိုမာလီပင်လယ်ဓားပြတွေရဲ့ ပြန်ပေးဆွဲခြင်းကို ခံလိုက်ရပါတယ်။ ဒီအခါ ဘာတွေဆက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ရသအပြည့်နဲ့ ရိုက်ကူးတင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်ရာမထတမ်း ကြည့်ရှုရလောက်အောင် ကောင်းမွန်တဲ့ အက်ရှင်၊ အတ္ထုပ္ပတ္တိဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကား ဖြစ်ပါတယ်။အကြိုက်ဆုံးကတော့ အခုမှ စပြီး ရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့ ဆိုမာလီဓါးပြဗိုလ် အဖြစ်သရုပ်ဆောင်တဲ့ (တကယ့် ဆိုမာလီလူမျိုး) Barkhad Abdi နဲ့ ၀ါရင့်မင်းသားကြီး Tom Hank တို့ကြားက စကားပြောခန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။IMDB Rating (7.9/10 ) ...